I-Tado Smart Air Conditioning, lawula imeko yomoya nge-iPhone yakho | IPhone iindaba
I-Tado Smart Air Conditioning, lawula imeko yomoya nge-iPhone yakho
Uluhlu lwezixhobo zokulawula ukufudumeza ikhaya lakho likhulu, kodwa xa sifuna ukugcina indlu yethu ipholile kakhulu kwaye asinayo inkqubo yokupholisa umoya, izinto ziba nzima. Abavelisi bemeko yomoya okwangoku ababonakali ngathi banomdla kakhulu kumaqonga anjengeKhayaKit okanye efanayo, kwaye sigwetyelwe ukusebenzisa ulawulo lwakho oluqhelekileyo olukude, okanye hayi.
I-Tado kunye nenkqubo ye-Smart Air Conditioning system isinika isisombululo esifanelekileyo kuthi kuthi abafuna ukulawula ubushushu bendlu nokuba kushushu. Ngesixhobo esilula kunye nesicelo se-iPhone yethu sinokumisela oomatshini bokuzenzekelayo kunye neeshedyuli eziza kusenza sonwabele ubushushu obuhle ekhaya kwaye sigcine imali ngaphezulu ngokwenza ngobulumko ukusebenzisa umoya wethu.
1 Iqhina lolawulo "eliqhelekileyo"
2 Ukuhambelana kunye noqwalaselo lokuqala
3 Elula okanye ehambele phambili, njengoko ukhetha
4 Thenga okanye urente, khetha oko ukhetha
Iqhina lolawulo "eliqhelekileyo"
Umatshini womoya oyiTado Smart sisixhobo sokulawula esahluke kancinane kunesiqhelo, okanye phantse akukho nto. Inolawulo lomzimba ngokucinezela umphambili, isikrini se-LED esikwazisa ngeqondo lobushushu kunye neemenyu ohamba kuzo, kunye ne-infrared emitter ukunxibelelana neyunithi yangaphakathi yomoya.
Ewe, kukho umahluko omncinci kwaye yiyo loo nto ibandakanya ubushushu bayo, into eneemodeli ezimbalwa kwintengiso ezinolawulo olukude. Kodwa umahluko omkhulu weTado kukuba uqhagamshela kwinethiwekhi yakho ye-WiFi kwaye ke kwi-intanethi, kwaye enkosi kwisicelo sayo se-iPhone (kunye ne-Android) ungayilawula naphi na nge-smartphone yakho, kwaye kuwo onke amandla ayo: inkqubo, oomatshini bokuzenzela, i-geolocation ... onke amandla esiwaqhelileyo nezinye izixhobo zeKhayaKit esinazo kwiTado, nangona kule meko ayihambelani neqonga leApple, kuphela kwayo Inqaku elibi, kodwa iyahambelana ne-IFTTT kunye neAmazon Alexa, ekunokuthi uninzi lube lolona lufanelekileyo. Ngapha koko, kwaye nangona iKhayaKit ihlala idityaniswa, andiphoswanga kukwazi ukusebenzisa iqonga leApple, ngaphandle kokuba kufuneka ndisebenzise usetyenziso olwahlukileyo.
Ukuhambelana kunye noqwalaselo lokuqala
Akululanga ukwakha isixhobo esihambelana nazo zonke izixhobo zomoya kwintengiso. Uluhlu lweempawu kunye neemodeli azinasiphelo, kodwa I-Tado ithembisa ukuba iya kuhambelana nayo nayiphi na kuzo ukuba inolawulo olude, kunjalo. Oku ngokucacileyo kuza ngexabiso: inkqubo yokuseta. Yinkqubo ende kunesiqhelo ikwizixhobo zolu hlobo, kodwa ayinzima kwaphela. Ngokwenyani yonke into yenziwa ngokuzenzekelayo kwaye kufuneka samkele kwaye siqinisekise ezinye iimenyu.
Ngokuphendula imibuzo elula elula yokuqala kwaye uqinisekise ukuba isixhobo somoya siphendula ngesandi kwimiyalelo esiyithunyelwa nguTado kwimizuzu embalwa siza kukwazi ukulawula isixhobo sethu kolu lawulo lukude lusekude. Ndinyanzelisa ukuba, yinkqubo ende, kodwa inokuthi yenziwe ngumntu wonke, nokuba yeyokuqala yakho into ofuna ukuyibeka ekhaya. Ewe kunjalo, kufuneka ubeke ulawulo lweTado endaweni enombono othe ngqo weyunithi yangaphakathi yesixhobo sokungenisa umoya, kuba isebenza nge-infrared. Le, iyinto ecacileyo, inokuba nzima kuba kufuneka iqhagamshelwe kwinethiwekhi yombane, kuba ayinabhetri okanye iibhetri, inqaku elinokuphuculwa.
Elula okanye ehambele phambili, njengoko ukhetha
Nje ukuba umiselwe, ungaqhubeka nokulawula imeko yakho yomoya njengesiqhelo, ukusuka kwi-Tado remote control uqobo, enkosi kwinto yokuba umphambili wayo uyaphendula xa uyicofa. Ungalawula ubushushu, amandla fan, nokucima ... njengeqhina lolawulo eliqhelekileyo, kodwa ngokucacileyo ayisiyiyo le nto umntu ayifunayo xa uthenga enye yezi mveliso. Nangona kunjalo, iyavunywa into yokuba banikezela ngale ndlela ngamanye amaxesha apho ulawulo lwencwadi lusebenzela khona.
Sinokwenza ulawulo olufanayo oluqhelekileyo olusuka kwi-app ye-iPhone, sinento ethile kwiscreen ekhangeleka ngathi yinto eqhelekileyo njenge-remote control, kodwa inkqubo enobuchule yiyo eyenza umahluko. Singazenza iishedyuli ezitshintsha ngokuxhomekeke kumhla, okanye kwiveki yonke. Isicelo sinokutsiba inkqubo ukuba iyafumanisa ukuba asikho ekhaya, okanye senze ngokuchaseneyo kwaye ukuba sisekhaya, yenza yonke into iqale ukusebenza. Oku kubandakanya irekhodi lobushushu ukubona imbali ngalo naliphi na ixesha, kwaye ngokuqinisekileyo ukuba abanye abantu banokusebenzisa i-iPhone yabo ukulawula imeko yomoya ngendlela efanayo kwaye ayixhomekekanga kuthi. Emva kweeveki ezimbalwa kuvavanywa isicelo ngeenkqubo ezahlukeneyo kunye nokusebenzisa useto olwahlukileyo ngokuxhomekeka kwindawo endikuyo, inyani kukuba yonke into isebenze kakuhle, ngaphandle kwentsilelo.
Thenga okanye urente, khetha oko ukhetha
UTado usinika into enomdla kakhulu xa singafuni ukwenza intlawulo yokuziqhelanisa nendlu yethu iphela, oko kukuthi, ukongeza ekubeni nakho ukuthenga olu lawulo lukude kwiwebhusayithi Tado okanye ngaphakathi Amazon, Singayithenga ngokurenta nge- € 4,99 ngenyanga, ngentlawulo yonyaka kunye nexesha elincinci lokurenta lonyaka omnye yeyiphi enokuthi iphinde ihlaziywe ekugqibeleni. Akukho khetho lwexesha lokuqala lokulingwa, njengoko sisithi elona xesha lincinci lokurenta ziinyanga ezili-12, kodwa ixabiso lalo liphantsi kakhulu kuba ngaphantsi kwe- € 60 ungasebenzisa ulawulo olukude unyaka opheleleyo.
UTado usinika Isisombululo sendalo iphela sokulawula imeko yethu yomoya kwaye sinike ulungelelwaniso oluphambili olusivumela ukuba sizenzele ukusebenza kwayo konke, nokuba sinokuthi sisebenzise indawo yethu ukuze sazi ukuba masenze ntoni ngokuxhomekeke kuyo. Ngolawulo olusebenzayo olusivumela ukuba siqhubeke nolawulo oluqhelekileyo lomoya nangaliphi na ixesha, inokubekwa nje njengendawo engeyiyo yokuba ayihambelani neKhayaKit ukuze idityaniswe nezinye izixhobo zedemotic ekhaya, kodwa inyani yile ukuza kuthi ga ngoku, andikuphosanga.
Umgangatho womoya weTado
Ulawulo oluphambili ngeenkqubo kunye noomatshini ngokwendawo
Ukuhambelana nayo yonke imimoya yomoya
Ukuseta okulula kodwa okude
Ukukwazi ukongeza abasebenzisi abaninzi kulawulo olunye olukude
Iyahambelana ne-IFTTT kunye neAmazon Alexa
Ulawulo olukude lweyunithi nganye yomoya
Ayinayo ibhetri, kufuneka idityaniswe kwinethiwekhi
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » I-Tado Smart Air Conditioning, lawula imeko yomoya nge-iPhone yakho
Molo, ndicinga ukuba awuzazisanga kakuhle. I-Tado SI iyahambelana neHomekit. Inguqulelo yakho yebhulorho yesi-3 iyahambelana ngokupheleleyo. Mhlawumbi uthenge endala kwisitokhwe ebengekho. Kule meko, nxibelelana nabo kwaye baya kukuthumela ibhulorho entsha simahla. Ndiyenzile kwiveki ephelileyo.
Ndibuze ngqo kubo, ndibuza ngokuchanekileyo malunga nale bhulorho uyikhankanyileyo, kodwa impendulo abandinike yona ayihambelani neTado Intelligent Air Conditioning, kuphela nezinye izixhobo.
I-Diegus ngonaphakade sitsho
Udidisa i-Tado smart thermostat (v3), eza nebhulorho kwaye iyahambelana nombulelo kwibhulorho eneKhayaKit, kodwa yeyokufudumeza kwaye ixabisa i-249 yezigidi nge-Tado smart yokulawula imozulu, eyenzelwe kuphela ii-air conditioners ( kuyabanda okanye kushushu) kwaye akuhambelani neKhayaKit (kwaye kufanelekile nge- € 148)
Kuya kufuneka wenze uphononongo (okanye uthelekiso) lwe «Efergy AirControl», kuba kubonakala ngathi iyafana nophawu lweTado, inkqubo efanayo kunye nokukhetha okufanayo, nangona kunjalo kubiza isiqingatha seTado (ngoku kukumazon € 79,6)
I-thermalat ye-V3 yokufudumeza iyahambelana kodwa enye yemeko yomoya ayihambelani.
Ndithe ndakuyithenga ndaxelelwa ukuba izodibana kodwa abasigcinanga isithembiso.Ndinaso neHomebridge ukuze isebenze neKhayaKit.Ukuba ndifumanise ukuba bayaxoka andizukuyithenga.
Iyahambelana kuphela nolawulo lweerunithi zohlobo olukude. Uthethile ngolawulo olukude kodwa imibhobho ihlala ikwizilawuli ezikude kodwa ixhunywe kwiyunithi ngentambo. Ayisebenzi ngomoya opholileyo yimibhobho ene-remote control eqhagamshelwe ngentambo.
Umboniso waseJapan ufuna ukubandakanyeka ngokupheleleyo ekwenziweni kwezikrini ze-OLED
I-3 zokusebenza zokuyila ngoku simahla ixesha elilinganiselweyo